နှင်းဆီနီမှ အပြစ်သား – Grab Love Story
သူမ အိပ်ယာကနိုးတော့ မနက်ခြောက်နာရီတိတိ……။ သူမအိပ်ယာက ထပြီး အိပ်ယာကို စနစ်တကျခေါက်သိမ်းလိုက်သည်။ နောက် ဝတ်ထားသမျှ အဝတ်တွေကို ချွတ်ကာ ရေလဲထဘီလေးကို ရင်လျှားလျက် ရေချိုးခန်းဝင်လိုက်သည်။
ရေကို စိတ်တိုင်းကျချိုးပြီးတော့ ရေလဲအစိုကို ခွတ်ကာ ရေချိုးခန်းတဲက တန်းမှာလှန်းလိုက်ပြီး ရေလဲတစ်ထည်ကို ဝတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်သည်။ နောက် မှန်တင်ခုန်ရှေ့ထိုင် အဝတ်လဲ ပြီးတော့ ၇နာရီ ၄၅ မိနစ်တိတိ………။
သူမအောက်ထပ်ထမင်း စားခန်းသို့ ဆင်းကာ မိဘတွေနဲ့အတူ ထမင်းစားပွဲမှာထိုင်ပြီး မနက်စာစားသည်။ မနက်စာစားရင်း မသားစုစုံညီ စကားတွေပြောကြသည်။(မှတ်ချက်-မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို စိတ်ထဲမင်ယောင်ကြည့်ပါ။)
သမီး ဟို ဘက်အိမ်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး သမီးပစ္စည်းတွေလဲရွှေ့ပြီးပြီ အဖေဘာထပ်ဖြည့်ပေးရဦးမလဲ…….။
ဟိုဘက်မှာ လိမ်လိမ်မာမာနေနော်။ မမရွယ်နုကိုလဲ အနိုင်မကျင်နဲ့ဦး……..။
ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့် သီရိနွယ် ပြုံးဖြစ်သည်။
အင်းပါ ဖေဖေရဲ့ သမီး မမစကားနားထောင်ပါ့မယ်……ဟု အပြုံးလေးဖြင့် အဓိပ္ပယ်ပါပါပြောလိုက်သည်။ ခဏနေတော့ဖခင်ဖြစ်သူက သူမကို ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးသည်။ သူမလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သည်ဆိုသောကြောင့် ဝယ်ပေးထားသည့်အိမ်ဖြစ်သည်။ သူမအဖော်ရရန် ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သော ရွယ်နုဆိုသည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို အဖော်အဖြစ်နေစေသည်။
ရွယ်နုက သီရိနွယ်ထက် ၃နှစ်ခန့်ကြီးပြီး မိဘမဲ့လေးမို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဦးမြင့်နိုင်တို့ကမွေးစားထားသည်။ မွေးစားသမီးဆိုတော့ သီရိလောက်တော့ အခွင့်အရေးမရရှာ။ အိမ်ဖော်တွေထက်သာသည်ဆိုရုံသာ အခွင့်အရေးရသည်။
ထွက်လာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပင် သူမဆံမြန်းရမည့် နှင်းဆီနီ စံအိမ်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ ခြံဝမှာပင် နှင်းဆီနီစံအိမ်ဟု ရေစထိုးထားသည်။ အိမ်ရောက်တော့ ရွယ်နုက အသင့်စောင့်နေသည်။ ဦးမြင့်နိုင်က သမီးဖြစ်သူကို မှာစရာရှိတာမှာပြီး ပြန်သွားသည်။ သီရိလည်း သူမရဲ့အိမ်အသစ်လေးကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေသည်။နောက်တော့ ရွယ်နုနှင့် အတူ သူမအခန်းလေးထဲ ပစ္စည်းတွေနေရာချကြသည်။ ပြီးတော့ နေ့လည်စာစားကြသည်။
သီရိ နားချင်ရင် ခဏနားလေ။ ၄နာရီထိုးရင် မမအခန်းကိုလာခဲ့ ကြားလား……။
သီရိ သူမဘဝကို ရွယ်နုထံကျေနပ်စွာ ပုံအပ်ထားသည်မှာ ကြာပါပြီ။ ဒီအကြောင်းကို သူမမိဘတွေပင်မသိ။ သည်ကမ္ဘာတွေ သူမကို အမိန့်ပေးသူမ ရွယ်နုတစ်ဦးသာရှိသည်။ အခုလည်း ရွယ်နုက ခွင့်ပြုသည်မို့ အခန်းထဲ ပြန်ကာ အိပ်လိုက်သည်။
တင်ပါးဆီကာ ပူစပ်သော ခံစားမှုနှင့်အတူ သီရိလန့်နိုးလာသည်။ ရွယ်နုက ဘေးမှာ တုတ်တစ်ချောင်းကိုင်ကာရပ်နေသည်။ ဝါးချင်းပြားကို ခပ်သေးသေးစိပ်ပြီး သေချာ အချောသပ်ထားတဲ့တုတ်။ ရွယ်နုက နာရီကို လက်ညိုးထိုးပြသည်။
၄နာရီ ၁၅မိနစ်။ သူမတော်တော် အိပ်ပျော်သွားတာပဲ။ ခွင့်ပြုချိန်ထက် ၁၅မိနစ်ပိုသွားသောကြောင့် အပြစ်ပေးခံရတော့မည်ဟု သီရိရိပ်မိလိုက်သည်။
သီရိလဲ အိပ်ယာမှ လူးလဲထကာ ကမန်းပတန်းမျက်နှာသစ်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲ လိုက်ဆင်းသွားသည်။ အပြစ်ပေးခံရတော့မည်မို့နည်းနည်းလည်းလန့်နေသည်။ ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ ရွယ်နုက ခုတစ်လုံးမှာထိုင်နေသည်။ မနီးမဝေးမှာ မိမျိုး၊ မိစန်းနှင့် မိအေးဟု သူမတို့ခေါ်သော အိမ်ဖော်မလေး သုံးယောက်ရှိနေသည်။ အကြောင်းသိတွေ။ တစ်ခါတစခါ သီရိကြိမ်ဒဏ်အပေးခံရလျှင်ပင် သူတို့က ဝင်၍ စွမ်းကြီးလောင်းတတ်ကြသေးသည်။
ကဲ မယ်မင်းကြီးမ ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်သိတယ်နော်……။
သီရိ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။
ရွယ်နု ကခေါင်းငြိမ့်ကာ မေးဆတ်ပြသည်။ ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ် ခံယူတော့ဟူသည့်သဘော ။ သူမဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသ်ပါသည်။ အိပ်ရထနောက်ကျသည့်အချိန်ကို ၁၀ ရသည့် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုသ်းထိုင်ထလုပ်ရမှာဖြစ်သည်။ သူမက ၁၅မိနစ်ဆိုတော့ ၁၅၀ပေါ့။
လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ကြက်ဃြေတ်ယှက်ပြီး ဘယ်လက်နဲ့ ညာနားရွက်ကိုစွဲ၊ ညာလက်နဲ့ ဘယ်နားရွက်ကို စွဲလိုက်ပြီး ရွယ်နုကို ကြည့်လိုက်သည်။ ရွယ်နု က မိအေးကို အမှတ်စဉ်တိုင်ပေးလိုက်ဟုပြောသည်။ သီရိလဲ သူမအလုပ်ကို စလုပ်သည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ် စောင့်ကြောက့်ထိုင်ချလိုက်ပြီး မတ်တပ်မတ်မတ်ပြန်ရပ်ဖြစ်တော့မှ မိအေးက တစ်ဟု စရေသည်။နောက်တစ်ခေါက်ကျ နှစ်။ ညာလို့မရ…….။ ညသည်ဟုထင်လျှင် လည်းကောင်းအခေါက်အတွက် အမှတ်စဉ်မရေ…..။ ထို့ကြောင့်ပိုလုပ်ရသဖြင့် သီရိအချောင်မခိုရဲ….။အခုချိန်တွင် သူမဘဝက မိအေးလက်ထဲမှာ။ မိအေးက အမှတ်စဉ်မရေလျှင် သူမဘာမှမတတ်နိုင်ပဲထပ်ကာထပ်ကာ လုပ်နေရမည်။
အသက်အားဖြင့် ၁၉နှစ်ခန့်သာရှိသော်လည်း ကိုယ်ဟန် ကျော့ရှင်းသူလေးမို့ ထိုင်ထလုပ်နေပုံလေးက ကြည့်၍ကောင်းလှသည်။ သို့သော် တစ်ကယ် လုပ်နေရတဲ့ သီရိအဖို့တော့မသက်သာလှပေ……..။ ပထမမသိသာသော်လည်း အကြိမ်ရေ ၈၀နီးပါးရောက်တော့ ခြေထောက်တွေညောင်းလာသည်။ အပြစ်ပေးခံနေရသည်ဟူသော အသိက သူမကို စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ အိမ်ဖော်တွေရှေ့မို့ သူမရှက်ရွံ့ရသည်။အကြိမ် ၁၃၀မြောက်တော့ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပေ……။ သို့သော် အပြစ်ပေးခံနေရတာဟူသော အသိနှင့် အတင်းကြုံးရုံးကာ ကျန်သော အကြိမ် ၂၀ကို ခတ်ခတ်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်လိုက်သည်။
အကြိမ်ရေပြည့်တေည့ သီရိနွယ် မောဟိုက်ညောင်းချိနေသည်။ သို့ပေမဲ့ အမောမဖြေရဲ လက်ကလေးပိုက်ကာ မတ်တပ်ရပ်နေသည်။
ရပြီသွား ရေသွားချိုး ပြီးရင် အဝတ်တွေ မဝတ်နဲ့ဦး ငါ့ကို အပေါ်ကစောင့်နေ……..။
အမိန့်ရသည်နှင့် သီရိ အပေါ်တတ်လိုက်သည်။ နောက်ခုတင်ပေါ် ခဏလှဲကာ အမော ဖြည်လိုက်သည်။ နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းရေလဲထဘီတစ်ထည်လဲကာ ရေချိုးခန်းဝင်ခဲ့သည်။သူမအခန်းနှင့် တွဲလျှက်ပင် ရေချိုးခန်း သန့်စင်ခန်းရှိသည်။ ရေချိုးလိုက်တော့ နုံးချိနေတာမျိုးမရှိတော့။ လန်းလန်းဆန်းတန်းဖြစ်သွားသည်။ နောက်တော့စိုနေတဲ့ ရေလဲကို ချွတ်က ရေချိုးခန်းထဲက အခြောက်တစ်ထည်ကို ရင်လျှားပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်ခဲ့သည်။
အခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်မှာ ရွယ်နု ထိုင်စောင့်နေသာရွယ်နုကိုတွေ့ရသည်။ ဘေးမှာလဲ အရောင်တူ အဝတ်အစားတစ်ထပ်ကို တွေ့ရသည်။ ရွယ်နုက သူမကို ထိုအဝတ်အစားတွေထဲက တစ်စုံကို ပေးကာဝတ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် သီရိ ရေလဲကို မမရှေ့မှာပင် ချွတ်ချလိုက်သည်။ နောက်ပထမဦးစွာ အနက်ရောင်ပင်တီကို အရင် ဝတ်လိုက်သည်။ နောက်ခါးရှည်ဘော်လီ အနက်ရောင်တစ်ထည်ကို သေသေချာချာ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ဆင်ရသည်။ ပြီးမှ အပေါ်က ရင်ဖုံးအညိုရောင်လေးနဲ့ ယောလုံချည် အညိုရောင်လေးကို သေချာဝတ်ဆင်ရသည်။ ပြီးသွားတော့ မမကသူမခန္ဓာကိုယ်လေးကို သူ့ရှေ့မှ တပါတ်လှည့်ပြစေသည်။
လှသားပဲ……. မှတ်ထား အဲ့တာ နင်အပြစ်ကြီးကြီးလုပ်လို့ ရက်ရှည်အပြစ်ပေးခံရရင် ဝတ်ရမဲ့ အပြစ်သားဝတ်စုံပဲ…….။
သီရိ အံသြလွန်းသဖြင့် ရှင်ကနဲအသံထွက်သွားသည်။ ဘယ်နှယ့် သူတပါး ဘုရားသွားကျောင်းတတ် အမြတ်တနိုးဝတ်သော ယောလုံချည်ကိုမှ သူမက အပြစ်ပေးသည့်အခါ ဝတ်ရမည့်အပြစ်သားဝတ်စုံဟုဆိုသည်။ အနည်းငယ် ရယ်ချင်သွားပေမဲ့မရယ်ရဲ။ ဘေးနားချထားငည့် လက်စွဲတော် ကြိမ်လုံးကို ကြောက်ရသည်။
နောက်သူမကို အပြစ်ပေးသည့်နေရာမှာ သုံးမည့် ပစ္စည်းကိရိယာတွေ အမျိုးအစား စုံလင်စွာပြသည်။ အိမ်ခွဲနေသည့်အခါ သူမကို ထိန်းသိမ်းရန် မမက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပဲ ဟူသော အတွေးနဲ့ အတူ သီရိကျောချမ်းသွားသည်။ နောက်နေ့များတွင် အပြစ်ပေးမခံရအောင် ဆင်ခြင်ရမည်ဟုလည်းတွေးနေသည်။ နောက်တော့ ထမင်းသွားစားမယ်ဟုဆိုဟာ သူမကို ပစ္စည်းတွေသိမ်းစေသည်။ တချို့တဝက်ကိုတော့ ရွယ်နုကိုယ်တိုင် အခန်းတစ်ခုထဲယူသွားသည်။
ဟဲ့ သီရိ မလာသေးဘူးလား………။
အိမ်ဝကနေ ရွယ်နု ခုနှစ်သံချီနဲ့ အော်တော့မှာ သီရိနွယ် အပြေးတပိုင်းထွက်လာသည်။ အနားရောက်တော့ ခေါင်းကို ဂွပ်ကနဲ အခေါက်ခံရသေးသည်။ နောက်တော့ သူမတို့အတွက်ဝယ်ပေးထားသော ကားလေးနဲ့ ရွယ်နုက သီရိနွယ်ကို ကျောင်းလိုက်ပို့သည်။
သီရိ အပြန်မမလာကြို ရဦးမှာလား……။
ဟင့်အင်း မမ! သမီးဘာသာ ပြန်ခဲ့မယ်။
ဘယ်ချိန် ပြန်ရောက်ရမလဲ သိတယ်နော်……..။
အင်းပါမမရဲ့……ဟုဆိုလျှက် သီရိရဲ့ပါးကို ရွှတ်ကနဲနမ်းကာ သီရိ ကားပေါ်က ဆင်းသွားသည်။ တတိယနှစ်ကျောင်းသူလေး ကလေးဆန်နေပုံ………။
ညီမဖြစ်သူကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ ရွယ်နု သူမ တတ်ရမည့်သင်တန်းရှိရာသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ရွယ်နုက သီရိထက် သုံးနှစ်လောက်ကြီးသည်။ ဘွဲ့ရပြီးသား…..။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှာမှ အလုပ်မဝင်ပဲ လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းတွေလိုက်တတ်နေ သင်ယူနေသည်။အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ သူမကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းငယ်လေးထူထောင်မည်။ ဦးမြင်နိုင်ကလဲ သူထောက်ပံမည်ဟုဆိုထားသည်လေ……။
သင်တန်းက သူငယ်ချင်းတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး နီးစပ်ရာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို ရွယ်နု ဝင်ခဲ့သည်။ ဆိုင်မှာထမင်းစားရင်း သင်တန်စချိန်မှာ ပိတ်ထားတဲ့ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်တော့ တတောင်တောင်နဲ့ ဝင်လာတဲ့ miss callတွေမှ အများကြီး။
ဟူသော အတွေးနဲ့ ဖုန်းလေးဆက်လိုက်သည်။
အေးရောက်ပြီ ခုလာခဲ့ဟု…..။ ဆိုကာ လိပ်စာတစ်ခုပြောပြပြီး ဖုန်းချသွားသဖြင့် သူမှ နှုတ်ခမ်းလေးမဲ့မိသည်။
လေဆိပ်လာမကြိုမိတာလေးကို သူက ယောက်ျားတန်မဲ့ စိတိကောက်နေသည်ဟုတွေးမိသည်။ သို့သော် ထမင်းကို မြန်မြန်စားကာ မောင့်စီ ထွက်လာခဲ၏။ မတွေတာ ၂နှစ်ကျော်ပြီလေ……။ရွယ်နုရဲ့ ချစ်သူသီဟ ကနိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ။ အခုက ခွင့်နဲ့ခဏပြန်လာတာ……။
သူမလိပ်စာထဲကနေရာရောက်တော့ ကားကို တိုက်အောက်ရပ်ခဲ့ပြီး တတိယထပ်သို့တပ်ခဲ့သည်။ အခန်းရှေ့ရောက်တော့ လူခေါ်ဘဲလ်လေးတီးလိုက်သည်။ ခဏနေတော့ အထဲကသစ်သားတခါးပွင့်ကာ မှုန်ကုပ်နေတဲ့ သီဟရဲ့မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရွယ်နုလဲ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ် အဟီးဟု သွားလေးဖြဲပလိုက်သည်။ သီဟက အပြင်တံခါးဖွင့်ပေးကာ ဝင်ဟုဆိုသည်။ သူမအထဲရောက်တော့ သီဟက တံခါးကို အတွင်းက ပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ ဂျိပ်ကနဲအသံက ကျောချမ်းစရာ…..။
ကဲ…..ပြော…..ဒေါ်ရွယ်နု ကျုပ်ကို လာမကြိုရတဲ့အကြောင်းအရင်း….
အဲ မောင်….အဲ့ဒါက ဟိုဟာလေ……
ဘယ်လိုရွှီးရမလဲ အပြေးအလွှားစဉ်းစားမိသည်။ သင်တန်းတတ်နေဟုဆို ဖြေလျှင် သူ့ထပ်သင်တန်းကပို အရေး ကြီးသလားဟုဆိုကာ စိတ်ထပ်ကောက်ဦးမည်။ မေ့သွားလို့ဟု ဖြေလိုက်မိလျှင် ချက်ခြင်းတိုက်ပေါ်က ကန်ချမည့်သဘောရှိနေသည်မို့ ရွယ်နု သီဟထိုင်နေသည့် နှစ်ယောက်ထိုင်သစ်သားခုံလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ သီဟက ဘုကြည့်ပြန်ကြည့်သည်။ မိန်းမ မာယာတွေလည်း အသုံးဝင်မည့်ပုံမပေါ်။ ထို့ကြောင့် လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ပူးကာ သူ့ရှေ့ထိုးပေးလိုက်သည်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်တော့ဟူသည့်သဘော…..။
သီဟက ထိုင်နေရာမှထကာ ဗီဒိုထဲ ကြိုးခွေတွေထုတ်ပြီး သူမဆီပြန်လာသည်။ အနားမှာလာထိုင်သော သီဟကို ရွယ်နု မဲ့ပြလိုက်သည်။ ဟုတ်တယ်လေ သူများသားသမီး နုနုထွတ်ထွတ်လေးကို အနိုင်ကျင့်ဖို့ဂွင်ဆင်နေတာကိုး…….။ သူမပုံစံကြောင့် သီဟက ချစ်စနိုးဖြင့် ခေါင်းကို လက်သီးစုပ်ဖြင့်ထုသည်။ သူမက ရှောင်လိုက်သဖြင့် သီဟရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ထိုအခါ သီဟက ရွယ်နုကိုယ်လေးကို မြတ်နိုးစွာ ပွေ့ဖတ်ထားလိုက်သည်……….ဟု မထင်ပါနဲ့….။ ရွယ်နုရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးနဲ့တင်းကျပ်စွာတုပ်နှောင်လိုက်သည်။ (ရေးရတာ ဖီးကျဲတာ)။ လုံးဝတင်းကျပ်သွားသည်မို့ အ…ကနဲ ညည်းညူမိသော ရွယ်နုနှုတ်ခမ်းပါးလေး သီဟရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေအောက်မှာ အသံပျောက်သွားကာ မျက်လုံးတွေ မှေးဆင်းသွားသည်။ ခဏနေတော့နှုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်ကာ ကြိုးနဲ့တုပ်ထားတဲ့ ရွယ်နုလက်တွေကို မြှောက်ပြီး ဦးခေါင်းနောက်ပြစ်က ပိုနေသော ကြိုးစကို ဆက်တီရဲ့နောက်မှီက သစ်သားတန်းမှာ ချည်နှောင်လိုက်သည်။ အခုတော့ ရုန်းမရ ကန်မရနဲ့ ရွယ်နုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျော့ကျော့လေးမှာ ကော့ကော့လေးဖြစ်နေသည်။
ရွယ်စုစိတ်ထဲ နှစ်နှစ်လောက်ငယ်သွားသလိုခံစားရသည်။ သီဟ နိုင်ငံကြားမသွားခင်ကလည်း ထိုသို့သော တုပ်နှောင်မှုမျိုးကို ခံစားဖူးသည်။ ထိုနေ့ကပင် သီဟကြောင့် သူမအပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရသည်။ အဲ့လိုပြောရတာလဲမကောင်း အမှန်တော့ထို့နေ့က နှစ်ဦးသဘောတူ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းပင်။(နှစ်ဦးသဘောတူ =သီဟဆန္ဒ 50%+ရွယ်နုဆန္ဒ 25%+တုပ်နှောင်ထားသဖြင့် ပြုသမျှ နုခဲ့ရခြင်း25%)
သီဟစကားကြောင့် ရွယ်နု ရှက်ဝဲဝဲဖြင့် မျက်စောင်းထိုးမိသည်။ လှမှာပေါ့ ဒီတိုင်းနေ့တောင် လူတကာငေးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ရှေ့မှာ ကော့ကော့လေးဖြစ်နေတာကိုး။ သီဟက သူမရဲ့ ဝဲဘက်ရင်အုံ့ကို သူ့လက်ဖြင့်ကိုင်ညှစ်သည်။ ဏွယ်နု ခန္ဓာကိုယ်လေးတုန်ကနဲဖစ်သွားငည်။ နဂို ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေတတ်သူပီပီ ရှက်သည်။ ပုံမှန်ဆိုသူ့လက်ကို ဖယ်ပြစ်မှာ ။ ခုတော့လက်တွေက ကြိုးတုပ်ထားတော့ မျက်လုံးတွေကိုပဲမှိတ်ကာ ငြိမ်နေရတော့သည်။
သူမဝတ်ဆင်ထားသော ရင်ဖုံးအင်္ကျီက လက်ပျက်လေးမို့ လက်တွေမြှောက်ထားရသဖြင့် ဖြူဝင်းသောဂျိုင်းသားလေးတွေက ပေါ်လွင်နေရာ သီဟက ငုံနမ်းပြီးလျှာနင့်ရပ်သည်သည်။ ဒီတကြိမ်တော့ ငြိမ်မနေနိုင် ပထမ ပါးစပ်တဟင့်ဟင့် ညည်းသည်။ နောက်တော့ ထွန့်ထွန့်လူးကာ ရုန်းတော့သည်။ ခဏနေမှာ သီက ကရပ်လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံနမ်းပြန်သည်။ လက်တွေကတော့ ရွယ်နုတစ်ကိုယ်လုံးကို ရန်ရှာနေသည်။ နောက်ရွယ်နုရဲ့ ထဘီကို ဖြည်ချလိုက်သည်။ ပြောလျော့သွားပေမဲ့ ခံပ်ါထိုင်နေတာမို့ လုံးဝကျွတ်ကျသွားတာမျိုးမရှိ ။
သီဟက ထဘီအောက်လက်လျှိုက ပင်တီပေါ်ကနေ ရွယ်နုရဲ့ အဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်နေသည်။ ရွယ်နုခြေထောက်တွေတုန်ယင်နေသည်။ သီဟက နမ်းနေရာမှခွာက သူမရဲ့လုံခြည်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပင်တီကို လဲ ချွတ်လိုက်သည်။ ရွယ်နု ရှက်စိတ်နဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းစေ့ကပ်ထားသည်။
ရွယ်နု မတုန့်ပြန်မိ။ ထိုအခါ သီက က ရွယ်နုရဲ့ နှဖူးကို ငုံနမ်းလိုက်သည်။
ရွယ်နု တွန့်ဆုတ်ဆုတ်နဲ့ သူ့အမိန့်ကို လိုက်နာမိသွားသည်။ သူက သူမအဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ကာ လက်ညိုးလေးထိုးသွင်းကာ ကလိသည်။ နောက်မျိုးစုံ ဆော့ကစားနေတော့ ရွယ်နုမနေနိုင် ။ ကော့ပျံနေသည်။ သူက ထိုသို့ကလိနေရာမှ ရုတ်တရပ်ကာ သူ့လက်ဝါးဖြင့် ထိုနေရာကို ဖောင်းကနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ ရွယ်နု ပါးစပ်က အားကနဲအော်သံနှင့်အတူ ခုဏက ကလိခံရသော အရှိန်နှင့်ပေါင်းကာ ဆီးတွေထွက်ကျကုန်တော့သည်။
ဝမ်းနည်း အားငယ်စိတ်နဲ့ ရွယ်နု တဟင့်ဟင့်ရိုက်ငိုမိသွားသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့ ဆီးတွေထွက်ကျတယ်ဆိုတာရှက်လဲရှက်စရာမဟုတ်လား…….။ဒီတော့ ငိုရိုက်နေတဲ့ သူမနှုတ်ခံတွေကို သီဟနှုတ်ခမ်းတွေက အငို တိတ်စေပြန်ပါသည်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သူ့လက်တွေဟာ ရွယ်နုရဲ့ ရင်သားတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှပင် စုပ်ကို ဖျစ်ညှစ် ဆော့ကစားနေသည်။ နောက် သူ့ရဲ့ လိင်တန်ဟာ သူ့တို့ရန်ရှာနေကြနေရာလေးကို ချိန်တွယ်လာသည်။ သူမ မရုန်းကန်ခဲ့ပါ။ အရာရာကို သီဟ သဘောကျ ဆီးမျော မိပါသည်။
စိတ်အလိုတိုင်း နှစ်ဦးသား နစ်မျောပြီးနောက်မှာတော့ သူမကို သီဟက ရေချိုးစေပါသည်။ သူမရေချိုးနေတုန်း သီဟ အခန်းထဲက ပေပွနေသမျှကို ရှင်းလင်းသည်။ ရွယ်နုလဲ ရေကို စိန်ပြေနပြေချိုးပြီး အဝတ်တွေပြန်ဝတ်ကာ ဧည့်ခန်းထဲ ပြန်လာခဲ့သည်။ ခုံမှာ နှစ်ယောက်တွဲထိုင်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ သီဟက ရွယ်နုကို လက်ပြန်လက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည်။
မောင် ဘာလုပ်ပြန်ပြီလဲ….. မကျေနပ်သေးဘူးလား
ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး ခဏပဲ…..။
သီဟက သူမမျက်နှာရှေ့ကျနေတဲ့ဆံစတွေကို နားရွက်နောက်ညှပ်ပေးရင်းပြောတယ်။ ပြီးတော့ စားပွဲပေါ်မှတင်ထားတဲ့ ဇလုံက အဖုံးလေးကိုဖွင့်ကာ ခေါက်ဆွဲပုတ်ကိုဘတယုတယ ခွန့်ကျွေးသည်။ ဒီလိုဆိုတော့လဲ မိရွယ်နုတို့က ကြည်ကြည်နူးနူးလေးပြုံးကာ စားပါသည်။ စားပြီးတော့ သီဟက ရွယ်နုကို သူ့ရင်ခွင်မှာမှီစေကာ စကားပြောကြသည်။ သမီးရည်းစကားပြောကြသည်ပဲ…။ တခါတလေ ဖွဖွလေးထုရိုက်တာ ဆွဲဆိတ်တာမျိုးရှိမည်ပေါ့။ သို့သော် လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ ရွယ်နုမှာ ထိုအခွင့်အရေးကိုမရ။ သီဟကတော့ အသဲယားတိုင်း သူမဆံပင်တွေကို ထိုးဖွလိုက် သူမကိုယ်လေးကို ထွေးပွေ့လိုက်နဲ့မို့ ရွယ်နုခဗျာ ကြည်လဲကြည်နူးရသလို အောင့်သက်သက်လဲ ဖြစ်ရသည်။
ညနေလေးနာရီထိုးတော့မှ သီဟက လက်ထိပ်ဖြုတ်ပေးသည်မို့ ရွယ်နုလဲ အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ သီရိက ရောင့်နှင့်နေသည်။
မမ နောက်ကျတယ် ထိုင်ထလုပ်ရမယ်……။
သီရိက လှမ်းစသဖြင့် ချစ်စနိုးဖြင့်ခေါင်းလေးခေါက်ကာ အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့သည်။ အိမ်မပြန်ခင်ဆေးဆိုင်က ဝယ်ခဲ့သောဆေးကို သောက်ရသေးသည်။ နောက်တော့ အဝတ်အစားလဲကာ သီရိအခန်းသွားချောင်းငည်။ မယ်မင်းကြီးမ အခန်းက စာကျက်သံကြားမှ ကိုယ့်အခန်းကို ပြန်နားသည်။
စာမေးပွဲနီးပြီမို့ သီရိနွယ်တစ်ယောက် ခြေချုပ်မိပါသည်။ သူမတင်မက သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကေသွယ်နဲ့ သီတာမြင့်တို့ပါ သူမတို့မိဘတွေက ရွယ်နုထံ အပ်နှ့ထားငဖင့် ခြေချုပ်မိနေကြသည်။ရွယ်နုကလဲ တခြားအချိန်တွင် ဖော်ရွေပေမဲ့ ဒီအချိန်တွင်မျက်နှာကြီးတင်စထားသဖြင့် ဘာရယ်မဟုတ်ပဲရှိန်နေမိသည်။ သူမတို့သုံးဦးကို ထိန်းသိမ်းထားငည့်ကာ လသတ်မှတ်ကာ သီရိကို ရက်ရှည်အပြစ်ပေးသည့်အခါဝတ်ခိုင်းသည်။ အညိုရောင်ဝတ်စုံကို ဝတ်ခိုင်းသည်။ ဖုန်းတွေကို သိမ်းထားသလို အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်လဲပေးမထွက် ။ စည်းကမ်းကို တင်းကျပ်ထားသည်။ ရိုက်ရလွန်းလို့ကြိမ်လုံးတွေ ဘယ်နှချောင်းပင်ကုန်နေမှန်းမသိတော့……..။
အခုလဲ သူမတို့သုံးယောက်ကို အစမ်းဖြေခိုင်းထားတာကို စစ်နေသည်။ စာမေးပွဲမှာတော့ အမှတ် ၅၀ဆိုအောင်သည်။ သူမကတော့ ဒူးလောက်တင်မှရင်လောက်ကျသည်ဟုဆိုကာ မှတ်မရရင်၇၀ အပြစ်ပေးသည်။ သုံးယောက်သား သူမရှေ့မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာထိုင်နေကြသည်။
သူမခေါ်သံကြောင့် သီတာမြင့် ကြောက်ကြောက်နဲ့ထူးလိုက်သည်။
သီတာမြင့်ခဗျာ ရှေ့ကို တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ထွက်ရသည်။ တစ်ဘာသာက ၆၅မှတ် ကျန်တဘာသာက ၆၀ စုစုပေါင်း ၁၅မှတ်လိုသည်။ ၁၅ချက်အရိုက်ခံရမည့်သဘော။ ရွယ်နုရှေ့မှာ ဘေးတစောင်းလေး မတ်တပ်ရပ်ပြီး ထဘီကို ရှေ့ကနေ တင်းတင်းဆွဲလိုက်သည်။ ထိုအခါ အညိုရာင်ထဘီလေးက တင်းအိနေသောတင်ပါးမှာ အတိုင်းသားကပ်နေသည်။
ထိုအခါမှရွယ်နုက ကြိမ်လုံးနှစ်လုံးကို လိမ်ပူးထားသော ကြိမ်လုံးကို ယူလိုက်သည်။
နာကျင်မှုကြောင့် သူမ မျက်ရည်ဝဲကာ ခါးလေးပင်ကော့သွားသည်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကျလာတဲ့ ကြိမ်ဒဏ်ကို ခံယူရင်း ငိုချလိုက်မိသည်။ ၁၅ချက်ပြည့်တော့တင်ပါးတစ်ခုလုံးထူပူနေသည်။ နာကျင်လွန်းသဖြင့်တွန့်လိမ်ကာ တင်ပါးကို လက်ဖဝါးဖြင့်ပွတ်သပ်နေမိသည်။ နောက်တော့ ရွယ်နုက သူမကို နေရာပြန်စေကာ ဒူးထောက်လိုက်ထားစေသည်။ နောက်တစ်ယောက်က ကေသွယ်။ သူမကတော့အမှတ် ၂၀ လိုသဖြင့် အချက်နှစ်ဆယ် အရိုက်ခံရသည်။
နောက်ဆုံး သီရိ အလှည့် ။ သူမက အမှတ် ၂၃မှတ်သာလိုသည်။
သီရိ အမှတ်အနဲဆုံးလူကို ငါဘာလုပ်မယ်ပြောထားလဲ
ဟို ဖင်ချွတ်ပြီးရိုက်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်……။ သူမအဖြေကြောင့် ရွယ်နုက မေးဆတ်ပြသည်။ ချွတ်လိုက်ဆိုတဲ့သဘော။ မိန်းကလေးချင်းပေမဲ့ သီရိရှက်ပါသည်။ သို့သော် မလွန်ဆန်နိုင်သည်မို့ ထဘီကို ဖြည်ချလိုက်ရသည်။ အတွင်းခံကိုလည်းချွတ်ချလိုက်ပြီး လက်ပိုက်နေသည်။
ဒီတော့မှရွယ်နုက သီရိရဲ့တင်ပါးပြောင်ပြောင်ကို ကြိမ်လုံးနဲ့စော်ပါတော့သည်။ တင်ပါးပေါ် ကြိမ်လုံးရာတွေ တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထပ်လာသည်။ ၁၅ချက်လောက်မှာ လုံးဝမခံနိုင်တော့သည်မို့ေခြေသလုံးပြောင်းရိုက်ပေးဖို့တောင်းပန်ရသည်။ အကျိုးဆက်က နှစ်ချက်ပို အရိုက်ခံရသည်။ ခြေသလုံးကော တင်ပါးပါ အလျှိုးရာတွေထပ်သွားသည်။ သူမ လုံချည်ပြန်ဝတ်ခွင့်မရပဲ သူငယ်ချင်းတွေဘေးမှာ ဒူးထောက်ရသည်။
ရွယ်နုက ဆေးဘူးချပေးပြီး နောက်၁၀မိနစ်နေရင်တော်တော့ဟုဆိုကာ ထွက်သွားသည်။ ရွယ်နုထွက်သွားပေမဲ့ သီရိတို့အချောင်မခိုရဲပါ။ နောက် ၁၀မိနစ်တိတိ ဒူးထောက်ပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆေးလူးကာ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ရက်တွေကျ စာမေးပွဲနီးလာပြီမို့ရွယ်နုသိပ်မကြမ်းတော့ပါ။ ညီမတွေ စားချင်တာချက်ကျွေးသလို ပျော်အောင်လဲထားသည်။ စာက ကြို ကျက်ထားသည်မို့ ချော့ကာမော့ကာ ပြန်နွေးစေသည်။ စာမေးပွဲမှာ သုံးယောက်လုံးထူးချွန်စွာ အောင်ကြပါသည်။
အချိန်ဟာ အရာရာကို ပြောင်းလဲစေတတ်ပါသည်။ ထို့အတူ သူမတို့လဲပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သီရိနွယ်တို့ သုံးယောက်လုံးဘွဲ့ရပြီးပြီမို့ သူမ ထိန်းကျောင်းစရာမလို။ သီရိက အိမ်ထောင်ပြုကာ သူ့အဖေရဲ့ကုမ္ပဏီကို ဦးစီးသည်။ ကေသွယ်က နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းဆက်တတ်သည်။ သီတာကတော့ မိဘတွေကနယ်ကမို့ ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာပင်နေကာ မိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်သည်။
အပြောင်းလဲကီးပြောင်းလဲခဲ့ရသူက ရွယ်နုပင်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်က လက်ထပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော သီဟ ကားအက်စီးဒန့်ဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။ သူမရူးမတတ်ခံစားခဲ့ရသည်။ လက်ထပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်သည်အပြင် သီဟရဲ့ပုံသွင်းမှုတွေမှာ အသားကျနေသောသူမ သီဟမရှိတဲ့နောက်ပိုင်း နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရသည်။ သီဟရဲ့ ကြမ်းတမ်းသော နူးညံ့သော အပြုအမူများကို ခံစားချင်သည်။ အားကိုးရာမဲ့သော နာခံရသော ဘဝမျိုးကို တောင့်တမိသည်။ မဖြစ်နိုင်ဟု ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ချုပ်တည်းကာ သီရိအဖေ ဦးမြင့်နိုင်က အမွေသဘောမျိုးလွှဲပေးထားသော နှင်းဆီနီ ဆံအိမ်မှာ တစ်ဦးတည်းနေသည်။ စတိုးဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ထားပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ခိုင်ခိုင်ဖြင့်သာ လွှဲထားသည်။
ရွယ်နု ဆက်သွယ်လေ့ရှိသူ တစ်ဦးသာရှိသည်။ သီရိနွယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်း သီတာမြင့်ပင်။ သီတာမြင့်ကိုတော့ ညီမတစ်ယောက်လို ခင်သည် ။ တခါတခါ သူမတို့အိမ်သွားအိပ်လေ့ရှိသလို သူမကလဲ နှင်းဆီနီမှာ အချိန်လာဖြုန်းလေ့ရှိသည်။
ကဲ သီတာ မမနောက်တစ်ပါတ်မလာခဲ့မယ်။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လက်ပြပြီး သီတာမြင့်အပေါ်ပြန်တတ်ခဲ့သည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ စားပွဲပေါ်မှာ ရွယ်နုရဲ အိတ်တလုံးကျန်ခဲ့တာကို သိရသည်။
သြ မမနှယ် မေ့ပြန်ပြီ…..။
သီတာမြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရေရွတ်ပြီး အိတ်ကလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ အထဲမှာ အခြားတိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေနဲ့ ဒိုင်ယာရီတစ်အုပ်ကို တွေ့သဖြင့် စပ်စုလိုစိတ်နဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ သီဟနဲ့ပါတ်သပ်တဲ့ ခံစားချက်တွေကိုတွေ့သဖြင့် ရွယ်နုကို သနားမိသွားသည်။ ဆက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့…
သမီးရေ သီတာ !ရွယ်လေး လာတယ်ဟေ့
ခဏနေတော့ တခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ ရွယ်နု ဝင်လာသည်။ သီတာလဲ စာရင်းစစ်နေရာမှပြုံးပြလိုက်သည်။
ထမင်းစားပြီးပြီလား…. မမ ကြာဇံကြော်တွေဝယ်လာတယ်။
အစားကိုပုပ်တယ်ဟု ရွယ်နု တွေးမိသည်။ နောက်တော့ နှစ်ယောက်သား အတူစားကြသည်။ ပြီးစကားပြောပြီး အိပ်ယာပြင်ကြသည်။
သီတာပေးသော သူမဒိုင်ယာရီလေးကို ကြည့်ပြီး ရွယ်နု မျက်နှာလေးရဲခနဲဖစ်သွားသည်။ ရှက်ရွံသလိုမျိုးခေါင်းလေးငုံ့သွားသည်။ သီတာက ခုတင်ပေါ်ထိုင်ကာ သူမခါးလေးကို ဖက်လိုက်ရင်း
ကို သီဟကို လွမ်းနေတုန်းလား……
သူမခေါင်းငြိမ့်ပြမိသည် ထင်ပါသည်။ သူမလဲ သီတာ့ဘေးထိုင်ချလိုက်သည်။ တော်တော်ကြာ စကားမပြောမိကြ။ ခဏနေတော့
ရွယ်နု ရှက်ဝဲဝဲနဲ့ရယ်တော့ သီတာက လိုက်ရယ်ပါသည်။
ရုတ်တရက်ဆွံ့အကာ သီတာ့ကို ငေးကြည့်မိသည်။ နောက်မှသတိပြန်ဝင်ကာ….
အာ သီတာကလဲ ဘာတွေပြောနေတာလဲ မိန်းကလေးအချင်းချင်း……
မဟုတ်ဘူးလေး သီတာရဲ့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ…..။
သူမတို့နှစ်ယောက်ထိုအကြောင်းကို ငြင်းခုန်ကြရသည်။ တော်တော်ကြာငည်။ သီတာက သူမနဲ့ အတူ နေချင်ကြောင်း သူလိုချင်သော ဘဝမျိုး ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောနေသည်။ သူမစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ နောက်တော့ သီတာနဲ့ သဘောတူညီချက်ယူလိုက်သည်။ ကြွေပြားစေ့လေ့တစ်ခု…..
သီတါ…..ခေါင်းကျရင် တစ်သက်လုံး ဒီအကြောင်း ထပ်မပြောရတော့ဘူး ပန်းကျရင်တော့ တစ်သက်လုံး မမကို ညီမပိုင်တယ်……။
Deal နှစ်ခုလုံးက တစ်သက်လုံးနော် မမ…..
ရွယ်နု ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ကြွေပြားစေ့လေးလေပေါ် မြှောက်တတ်ကာ လက်ဖဝါးတွေထဲ ပြန်ကျလာသည်။ နှစ်ယောက်လုံးစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေကြသည်။ ရွယ်နု သက်ပြင်းကို ချကာ လက်ကို ဖွင့်လိုက်တော့…….
ဟေး…..ကနဲ သီတာထအော်သည်။ ရွယ်နုစိတ်ထဲ ဝမ်းနဲသွားသလို မခံစားမိ…….။ သီတာက သူမကို မျက်ခုံးပင့်ပြသည်။
သီတာက သူမခါးကို ဖက်ကာ ခုတင်အောက်မှာ ဒူးတုပ်ထိုင်မိသွားအောင်လုပ်သည်။ နောက်မော့ကြည့်လာသော သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေပေါ် လက်ညိုးလေးတင်ကာ…….။
သီတာပြုံးသည်။ ရွယ်နု နှဖူးပေါ် အနမ်းတစ်ပွင့်……
မှန်တင်ခုံထဲက ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ပြီး ပြုံးမိသည်။ သူမဒီနေ့ လှလွန်းနေသည်လေ။ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ အဖြူရောင်ပွဲတတ်ဝတ်စုံလေး ကိုဆင်မြန်စထားသည်။ ပါးပေါ်မှာ သနပ်ခါးကို ပါးပါးလေး လိမ်းထားသည်။ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆံပင်တွေကို ညီမဖြစ်သူ သီရိက ဥေပ်စွာ ဖြီးသင်၍ ဆံထုံးထုံးပေးနေသည်။
သီရိရဲ့ အသံကြောင့် ရွယ်နုသတိဝင်လာကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ သီရိက သူမခါးလေးကို ဖတ်ကာ မမ အရမ်းလှတာပဲဟုဆိုသည်။ သူမ ကြည်ကြည်နူးနူးပြုံးဖြစ်သည်။ နောက်တော့ သီရိက သူမလက်ကို ဆွဲကာ အခန်းပြင်ခေါ်သွားသည်။
နှင်းဆီနီ ဆံအိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းလေးဟာ ပုံစံပြောင်းလဲနေပါပြီ။ ဧည့်ခန်းရဲ့ ခေါင်းရင်းနံရံမှာ Collaring ceremony ဟု စာလုံးရေးထားပြီး အခန်း အလယ်မှာ စားပွဲတစ်လုံးချထားသည်။ စားပွဲပတ်ပတ်လယ်မှာ ကုလားထိုင်ခြောက်လုံးရှိပြီး အခန်းထဲမှာ အမျိုးသမီး လေးဦးရှိနေသည်။
သီရိနွယ်က ရွယ်နုကို သီတာမြင့်ရှိရာသို့ခေါ်သွားပြီး ရွယ်နုရဲ့ လက်ကို သီတာမြင့်လက်ထဲ ကမ်းပေးလိုက်သည်။ သီတာက ရွယ်နုကို စာပွဲရှိရာခေါ်သွားကာ စားပွဲရဲ့ ညာဘက်ချမ်းတွင်နှစ်ဦးသားဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်။ သူမတို့နဲ့ မျက်နှာ ချင်းဆိုင်မှာ သီရိနဲ့ ကေသွယ်က ထိုင်ပြီး စာပွဲရဲ့ ထိပ်နှစ်ဖက်မှာ ရှေ့နေမလေး နန္ဒာနဲ့ ရွယ်နုရဲ့ သူငယ်ချင်း ခင်ခင်က ထိုင်သည်။
အဟမ်း လူစုံပြီဆိုတော့ စလိုက်ရအောင်
ရှေ့နေမလေး နန္ဒာက ဦးစွာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး သူမစာရင်းပြုစုထားသော ရွယ်နုနဲ့ သီတာမြင့်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဖတ်ပြသည်။ ပြန်လည်အတည်ပြုသည်။ နောင်တစ်ချိန်အငြင်းမပွားရအောင် ပြင်ဆင်ကြခြင်းပင်။ နောက်တော့ သူမတို့ကို စာချုပ်နှစ်ဆောင် ကမ်းပေသည်။ လက်ထပ်စာချုပ်သဘောပင်။ သို့သော် လက်ထပိစာချုပ်တော့မဟုတ်။ ဒီစာချုပ်ထဲမှာ သီတာနဲ့ ရွယ်နုတို့ရဲ့ သဘောတူညီမှုတွေ ကတိကဝတ်တွေပါသည်။
စာချုပ်ရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ လက်မှတ်ထိုးရန်အတွက် နေရာရှိသည်မို့ သူမတို့လဲ သူမတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ အသီးသီးလက်မှတ်ထိုးကြသည်။ သီရိနွယ်တို့ကလဲအသိသက်သေနေရာမှာ လက်မှတ်ထိုးကြသည်။
ကဲ ဒီလင်ဒီမယား အဲလေ မှားလို့…….. ဒီစုံတွဲသေတဖန်စက်တဆုံး လက်တွဲနိုင်ကြပါစေ(ဖွီး ဆုတောင်းပေးရတာ လက်ပေါက်ကပ်တယ်)
ရှေ့နေမလေး နန္ဒာရဲ့ ဆုတောင်းကြောင့်သူမတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပြုံးပြီး ကြည့်မိသည်။ သီတာက ရွယ်နုကို ကြည့်ကာ ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီးမတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ရွယ်နုကလဲ သူမရှေ့က ပါကင်လှလှထုတ်ထားတဲ့ ဘူးလေးကို ယူကာ မတ်တပ်ထရပ်သည်။ နောက်သီတာက ရွယ်နုလက်ကိုဆွဲကာ collaring ceremonyဟုရေးထားသော်နံရံအနီးသို့လျှောက်သွားသည်။
Collaring Ceremony ဟုရေးထားသော စာတန်းရဲ့အရှေ့မှာ ကျွန်မနဲ့ မမရွယ်နုတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်နေတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့ အကြည့်တွေဟာ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စီမှာစုပုံနေတယ်။ ကျွန်မရှေ့မှာ မမဒူးထောက်ချလိုပြီး သူ့လက်ထဲက ဘူးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကမ်းပေးတယ်။ ကျွန်မလှမ်းယူလိုက်တော့ သူမရဲ့ လက်တွေကို နောက်ပစ်ကာ မျက်လွှာလေးချရင်း ငြိမ်သက်နေလေရဲ့ ။ ကျွန်မလက် လက်ထဲက ဘူးလေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ ပန်းနုရောင်လည်ပတ်လေးတစ်ခု……..။
ကျွန်မ ဒူးထောက်နေတဲ့ မမရှေ့ ထိုင်လိုက်ရင်း မမရဲ့ဆံထုံးကို ဖွဖွလေးဆွဲလှန်လိုက်သည်။ ခေါင်းငုံထားရာကနေ အပြုံးမျက်နှာလေးနဲ့ အလိုက်သင့်လေးခေါင်းမော့လာသည်။ ဒီတော့မှ ဆွဲကြိုးလည်ဆွဲတို့ ဆင်မြန်းထားခြင်းမရှိတဲ့သူမရဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို လည်ပတ်လေးပတ်ပေးလိုက်သည်။ လက်ခုပ်သံတွေ တဖြောင်းဖြောင်းထွက်လာသည်။ ပျော်လိုက်တာလေ……။ ငယ်စဉ်ထဲက မြတ်နိုးရ ချစ်ရသော အမျိုးသမီး အခု သူမရှေ့မှာ ဒူးထောက် ငြိမ်သက်လျှက်။ သူမဘဝတစ်ခုလုံး ကျွန်မအဆုံးအဖြတ်ကို နာခံရန် အသင့်ဖြစ်နေသော အနေအထားနှင့်ဆိုတော့ ကျွန်မရူးလောက်အောင်ပျော်ပါသည်။
နောက်တော့ မမရဲ့ လည်ပါတ်လေးမှာ သံကြိုး သွယ်သွယ်လေးတစ်ချောင်းကို တပ်ဆင်ကာ စာပွဲရှိရာသို့ဆွဲခေါ်သွားလိုက်သည်။ မမက ကျွန်မနောက်ကနေ မျက်လွှာချလိုက်လာမှာ သေချာနေပါသည်။
အကျွေးအမွေး အစီအစဉ် စပါတော့ဗျို့……..
ကေသွယ့်အသံဖြစ်သည်။ ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တော့ မမရွယ်နု က စာပွဲအလယ်မှာ ပြင်ထားတဲ့ စားသောက်စရာတွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီရှေ့သေချာထည့်ပေးသည်။ လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း လည်ပတ်မှာ တပ်ထားတဲ့ သံကြိုးလေးက တရမ်းရမ်းနဲ့ မမက ယဉ်နေပြန်ပါသည်။ စားရင်းသောက်ရင်း ကျွန်မနဲ့ မမကို စကြနောက်ကြပြီး သီရိတို့လေးယောက်ပြန်သွားသည်။ ကျွန်မလဲ တံခါးတွေလုံအောင်ပိတ်လိုက်သည်။
အိမ်ထဲလှည့်ဝင်လိုက်တော့ ကျွန်မရှေ့မှာ မမက လက်ကလေးနှစ်ဖက်နောက်ပစ်လို့ အသင့်အနေအထား…….။ ကျွန်မလဲ သူလည်ပင်းက တွဲလောင်းကျနေတဲ့ သံကြိုးလေးကို ဆွဲကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ခေါ်လာခဲ့သည်။ မမကတော့ တိတ်ဆိတ်စွာပင် မျက်လွှာလေးချပြီးလိုက်လာသည်။ အခန်းတံခါးပို ဂျိပ်ကနဲပိတ်လိုက်ပြီး တော့ ကျွန်မခုတင်ပေါ်ထိုင်ကာ မမကိုလဲ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်စေသည်။ နောက်တော့ မျက်လွှာချထားစဲ သူမကို အသဲယားလာသည်မို့ ခါးလေးကိုဖတ်ကာ သူမပါးပြင်ဆီ ကျွန်မမျက်နှာတိုးကပ်သွားသည်။ သနပ်ခါးနံကျန်မနှာဝဆီတိုးဝင်လာသည်။